Sariirta ilmaha - iSearch
Start Ilmaha & Ilmaha xanaanada sariirta
Dhawaan ayay noqon kartaa ilaa hadda iyo jiilka soo socda ayaa ah jidka. Waalidiin badan ayaa ka baqaya hawsha cusub, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo farxad iyo rajo. Waxaa jira waxyaabo badan oo loo sameeyo waalidiinta, sidaas darteed qolalka carruurta waa in la sameeyaa, wax kastana waa la diyaariyaa. Qalabka ilmo loogu talagalay dabcan sariirta markaa ha maqnayn. Horumarka ilmaha ayaa si gaar ah muhiim ugu ah bilaha iyo bilaha ugu horreeya iyo hurdo fiican. Hurdada, tamarta loo baahan yahay ayaa ugu dambeyntii la soo ururiyaa, riyooyin cusubna waxaa loola dhaqmaa riyada. Dhalinyaradu waa la ilaaliyaa hurdo ku filan ka hor intaanay dhicin oo ay muhiim u tahay koriinka nidaamka difaaca.
Maxay hurdo u tahay ilmaha?
Celcelis ahaan, ilmaha cusub ee 16 wuxuu u seexdaa saacadaha 19 maalintii iyo laba ilaa saddex saacadood oo ay toosaan. Caruurtu waxay u baahan yihiin hurdo yar ka dib qiyaastii nuska sano, iyo inta u dhaxaysa cuntada oo masaafada u sii weynaado. Sannad ka dib marka ilmuhu dhashaan oo kaliya ayaa laba jeer maalintii qaata oo caadi ahaan habeenkii ayuu seexdaa. Si cunug u helo meel nabad ah oo meel ammaan ah oo la seexdo, doorashadu waa mid sax ah sariirta aad u muhiim ah. Ka hor intaadan a sariirta Qof walba waa inuu ka fekero waxa laga filayo sariirta. Carruurtu waxay haysan karaan sariirahooda iyo hurdadoodu sida ugu dhow ee waalidkooda. Qof kasta waa inuu, dabcan, ka walwalaa inta uu le'eg yahay meel uu ka mid yahay sariirta la heli karo. Sariiraha ilmaha ayaa la heli karaa ma aha oo keliya noocyo kala duwan, laakiin sidoo kale siyaabo kala duwan. Door muhiim ah ayaa la ciyaaraa inta sariiraha la isticmaalayo. Waxaa jira sariiraha carruurta koraya oo waalidkana waxay kaloo iibsadaan sariir cusub oo ka weyn waqtigooda.
Sariiraha ilmaha ee kala duwan
Waa inay noqotaa sariirta iibsan, ka dibna waxaa jira qiyaaso kala duwan. Waxaa jira sariiro ku habboon da 'kasta oo caruur ah. Qof kasta sariirta markaa waxaa muhiim ah in hurdada nasashada laga dhigo mid suurtogal ah iyo in ilmuhu leeyahay badbaado iyo ilaalin ku filan. Ilaa da'da lix bilood, sariir dheeraad ah badiyaa waa mid aad u caan ah bilowga. Dhallaanka cusubi way ku seexan karaan, waalidkuna waxay la socon karaan ilmaha. Da'da afar illaa lix bilood inta badan Wiegefunktion waa caan ah oo tanina a sariirta ku haboon. Haddii dhaqdhaqaaqa waalidku muhiim yahay, waalidiin badan ayaa sidoo kale gaari kara safar. Sariirta sariirta waa mid aad u haboon marka caruurta udhexeeya 2 iyo 4 yihiin da 'sano. Carruurta halkan waxay leeyihiin kor u kaca si ay u guuraan oo ay ku ilaaliyaan guluubyada. Iibsashada sariirta ilmaha waxaa lagula talinayaa afar sano ka dibna ma lahan baararka ilaalinta. Ciyaalka aadka u yaryar waa sariiraha dheeraadka ah waa kuwo caan ah, laga bilaabo dhalashada illaa da'da lix bilood. Sariiraha ayaa loo qaabeeyey si ay ugu xirmaan sariirta waalidka iyada oo aan la helin farqi. Hal dhinac oo dhinac ah waa in la duubaa ama la demiyaa inta lagu jiro rakibidda. Iyada oo sariirta ante-ga waxaa jira meelo muhiim u ah waalidka iyo ilmaha. Carruurtu waxay hurudaan cilmi ahaan si loo xaqiijiyo in ay ka fiicnaadaan marka la maqlo dhawaaqyada neefsashada ee waalidka. Horumarka ilmaha iyo damaanad-waalid-ilmaha waa in sidoo kale saameyn ku yeeshaan. Carruurtu waxay helayaan hurdo deggan oo u dhaw waalidkood. Sariir raaxo leh ayaa sidoo kale suurtagal ah sariir saa'id ah, tan iyo marka ilmuhu markaa waa in la qaadaa oo keliya. Ka dib markaa sariirta sidaas darteed waxay leedahay size yar, sidoo kale waa ku haboon yahay halkii qolalka yar yar.
Sariiraha iyo sariiraha
Wixii sariiraha sida sariirta waxaa jira guud ahaan laba qiyaasood oo kala duwan kuwaasina waa waqtiyada 140 70 centimeters iyo saacadaha 120 Saacadaha 60. Iyada oo loo maro baararka qatarta ah, joodariga ayaa xaddidaya sariirta sariirta, oo ilmaha siinaya badbaado dhamaystiran. Intaas waxaa dheer, xiriirka ugu wayn ee la taaban karo ayaa la sameeyaa, waalidiintuna waxay leeyihiin xakameyn wanaagsan. Rugaha, masaafada waa in aysan ka weynayn Saacadaha 6,5 oo aan ka yarayn Saacadaha 4,5. Carruurtu waxay gaari karaan qataarada, laakiin ha ku daadin wax alaab waaweyn ah sariirta. Si looga hortago in caruurtu aysan ku dhicin, madaxu ma gudbin karo. Sidoo kale sida daggan oo isbedel waa sariirta oo leh jajabin aad u habboon. Haddii waalidku ka baxo qolka, dhallaanka waxaa lagu meelayn karaa sariirta xarkiisa. Badanaa sariiraha way sii kordhayaan waxaana si sahlan loogu beddeli karaa sariir ama sariir dheeraad ah. Sidaa daraadeed, moodooyinka waa ay kala duwanaan karaan noloshooda shaqadooda. Shuruudaha yar ee booska ayaa ah, dabcan, faa'ido daro ee sariiraha. Sababtoo ah culeyska, sariirtu waa mid go'an oo sidaas darteed qof walba waa inuu ka fekero meesha sariiraha la dhigo. this sariirta badanaa waa ka qaalisan yahay marka la barbardhigo noocyada kale, laakiin waxaa loo isticmaali karaa dhawr sano. Waxa kale oo faa'iido leh in ilmuhu leeyahay iyaga u gaar ah sariirta bilawga bilowga. Meelaha dabacsan waxaa inta badan lagu hagaajiyaa dhererka si carruurta si fudud looga saaro. Sida laga soo xigtay hal sariirta markaa caadi ahaan waa la socdaa sariirta ilmaha iyo ka dib marka carruurtu la socoto da 'yarta, waa iibsasho muddo dheer ah. Waxba ma laha midkee sariirta ama sariirta carruurta, tayada waa in had iyo jeer la tixgeliyaa. Sariirta ilmaha waxay leedahay isku darka madadaalo, ciyaar iyo hurdo. Ammaanka iyo xasiloonida waxay sidoo kale ka ciyaaraan door muhiim ah. Caantu waa sariiraha hal mar ee carruurta sida sariir caadi ah oo cabbirkana waxaa loogu talagalay carruurta halkan. Marka la barbardhigo sariiraha dadka waaweyn, sariiraha way hooseeyaan, hooseeyaan oo gaaban yihiin. Haddii qoysasku leeyihiin dhowr carruur ah, ka dibna sariiraha sariiraha waa kuwo caan ah. Sariirta sariirta leh waa sariir saafi ah, laakiin sariir hoose waa maqan yahay. Marka laga reebo in ay jiraan carruurta waaweyn oo sariiraha dhalinyarada ah iyo sariiraha theme.
Qalabka mid ka mid ah sariirta
Sida caadiga ah waxaa jira hal sariirta oo ka samaysan sadax qalab oo kuwani waa MDF, dooxo iyo qoryo adag. Qofkasta oo dooranaya qoryo waa inuu daryeeli karaa in aysan jirin geeso fiiqan ama meelo adag. Inta badan la isticmaalo waa qoryo adag oo sariiro ah. Saqafka qoryaha adag wuxuu kor u qaadaa jawiga qolka wanaagsan oo leh dabeecad furan. Xaaladda boodhka, lacag-bixinta qalabka korontada ayaa looga hortagayaa saameynta lidka bakteeriga waxaa lagu gaari karaa. Qoryaha adag waxaa lagu tilmaami karaa gaar ahaan waqtiga dheeriga ah iyo xasilloonida. Beech waa mid aad u deggan iyo alwaax adag. Diirka waa raqiis, miisaanka waa uu hooseeyaa, qoryihiina waa mid cufan oo jilicsan. Bikomadu waxay bixisaa midabka iftiinka, waa alwaax adag oo wali la dabacsan yahay. Miisaanka bjørk waa uu hooseeyaa, waana mid culus. Qoryaha jilicsan waa geed qafiif ah oo aan dhicin. Qoryaha waa mid fudud oo jaban, laakiin wuxuu qori karaa qorraxda. In geedkii waxaa ku jira miro dhar ah oo qoryaha waa adag yahay. Alwaaxdu ma dhicin, wayna culus tahay. Qoryaha geedkii geedaha waxaa lagu tilmaami karaa xoog iyo adkaysi. Badanaa a sariirta oo ka samaysan qori, kaas oo ah koolada, haraaga alwaax iyo bawdada la riixay. Ka dib marka ay tahay qashinka qoryaha, daaqadaha ayaa aad u wanaagsan. Marka loo barbardhigo qoryaha adag, waa in la ogaadaa in xasilloonidu ay ka yar tahay. Waalidiin badan ayaa isticmaala qalabka yaryar, sababtoo ah waxay sidoo kale sii deyn karaan walxo halis ah iyada oo loo marayo dareeraha iyo lakabka. MDF waa gudiyada dhirta qoryaha ee dhexdhexaadka ah, kuwaas oo ay sameeyeen qalqal galinta qoryaha. Qalabku waa ka fiican yahay marka la barbardhigo qalabka yaryar iyo dusha sare ayaa si fiican loo rinjiyeyn karaa waana ka fiican yahay. Maaddada ayaa waliba hal mar ah sariirta sidoo kale aad u jaban. Hase yeeshee, formaldehydes waxaa laga yaabaa in laga yareeyo oo kuwani waxay halis u yihiin caafimaadka. Hase yeeshee, khatarta caafimaadku waa la yareyn karaa, maxaa yeelay maantana waa la isticmaali karaa. Si kastaba ha noqotee, haddii qoyaanka uu sarreeyo, sameysashada caaryo ayaa dhici karta. Marka loo barbardhigo qalabka yaryar, jajabkii jajabkii jilicsanaa wuu sarreeyaa.
Muhiimaduna waa mid ku haboon sariirta Furaashaanta taas oo aan daabacnay hagidkayaga.
Meelaha sariiraha ilmaha
Sariiraha sariiraha waxaa lagu daaweyn karaa siyaabo kala duwan. Sariiro badani waa dabiici ah, saliideed, lakabyo ama laalaabay. Waxaa muhiim u ah lacagtu in ay isticmaalaan kaliya cambaarta ugu badan ee candhuufta. Waxay noqon doontaa a sariirta oo lagu bixiyo ganacsiga, ka dibna waxay caadi ahaan u dhigantaa heerarka yurub. In kasta oo alwaaxda leh shaabadu aysan ahayn neefsasho, waa nadaafad iyo si sahlan oo loo daryeelo. Tani waxay muhiim u tahay waalidiinta sababtoo ah wasakhda si fudud ayaa looga saari karaa. Haddii alwaaxu uu glazed yahay, hadhuudhku weli waa muuqan karaa. Dusha sare waa neefta laakiin weli la ilaaliyo. Waxay muhiim u tahay glaze in aysan jirin waxyaabo waxyeello leh. Ma yahay a sariirta firfircoonida neefta ayaa jirta iyo cimilada qolka waxaa la hagaajiyay saamaynta dawada. Inkasta oo qoryaha laga daaweeyo saliida, xagasha iyo lebiska waxaa loo abuuri karaa si fudud sida glazes iyo caanaha. Waalidiin badani waxay ku qiyaasaan in moodooyinka dabiiciga ah ay yihiin kuwa ugu caafimaad badan iyo sariiraha ugu fiican. Si kastaba ha noqotee, qoryaha aan la daaweyn, si kastaba ha ahaatee, wasakhdu way fududahay in la nuugo oo aan si sahlan looga saari karin. Dusha sare ee sariiraha ilmaha waa mid aan habooneyn. Qoyaanka waxaa ku jira awoodda nuugista ee sarreeya sidaas awgeed qoryaha ayaa sidoo kale si dhaqso ah u baddeli kara. Haddii dhibco aan hawo lahayn, caaryadu sidoo kale way sameyn karaan.
BABI CODSIGA ILKAHA CALAAMADA KOOXAHA CALAAMADAHA Vera Kursiga dhererka la isku hagaajin karo Caddaan loo bedeli karo tusaha sariirta ee yaryar
Sariirta la hagaajin karo oo leh saddex meelood oo dherer ah. Si fudud ayaa loo bedeli karaa sariirta yar yar.
Dareeraha qulqulaya ee ilaalinta ilkaha carruurta ee xasaasiga ah.
Furaashka xNUMXcm ee boodhka leh leh hypoallergenic raaxo leh, daboolka bakteeriyada bakteeriyada bakteeriyada loo yaqaan 'aloe vera cover'. Furaha daboolka laga saari karo oo la dhaqi karo.
Waxaa laga sameeyey Yurubta heerarka amniga ee Yurub, oo leh rinji leh sun aan ahayn, ilmaha iyo midabka dabiiciga ah ee dabiiciga ah. 12-ga bilaashka ah ee sariirta iyo joodariga.
Cabbirka qiyaastiisu waa: B: 65 cm L: 125 cm H: 84 cm, Aagga jiifka: 120 x 60 cm
dalabXayawaan bixinta 3
sigaar cabbista sariirta 'Adam & Eule', sariirta canugga, sida gogosha gogolka, cirka, buulka, joodariga, 70x140cm bedelka tusmada sariirta Junior
XAQIIQOOYINKA ROBA BARNAAMIJKA CARRUURTA BEDIIDKA CINJIRKA 70 x 140 cm waxay ku haboon tahay qalabkii hore ee ilmaha.
JOOJINTA WAXAA LAGA QAADAY CINTA CUTE, buulka jilicsan ee jilicsan, joodariga ka hortagga alerjiga, iyo cirka oo leh cirifka cagaarka leh waa qayb ka mid ah dhamaystiran.
ISTICMAALKA WAXYAABAHA LAGA HELI KARO, sariirta waxaa loo bedeli karaa sariir yar, iyadoo loo xaqiijinayo nolol waqti dheer.
BEDRO DIB U DHEXEEYA MUWAADINIINTA 3-isku dhejisan ee dhererka 9,5 cm, 20 cm iyo 32,5 cm.
BY CONVERTING, sariirta waxaa loo isticmaali karaa wakhti dheer, miisaanka ugu sarreeya: kilo 35.
gogosha sariirta oo dhameystiran 'Liebhab Bär', sariirta ilmaha ee dabiiciga ah inc sariirta, gogosha, buulkiisa, joodariga, combi cot 70x140cm oo loo beddeli karo sariirta yar
KHARASHKA CARRUURTA LA SIIYO 'Liebhabär' oo leh joodariga dhererkiisu yahay 70 x 140 cm wuxuu ku habboon yahay qalabka bilowga ah ee carruurta.
JOOJINTA CALAAMADAHA CUNTADA, boodh jilicsan oo jilicsan, joodar alerjiyo leh, iyo cirka oo leh cirifka cagaarka leh ayaa qayb ka ah qalabka dhamaystiran
BEDRO DAWLADDA BEDAANKA waa xNUMX-isku-dhejisan dhererka 3 cm, 9,5 cm iyo 20 cm
BY CONVERTING, sariirta waxaa loo isticmaali karaa wakhti dheer, miisaanka ugu sarreeya: kilo 35
Belivin 2in1 sariirta ilmaha, sariirta 140x70cm cad | bedelka dhalinta sariirta dhalinyarada ah ee sariirta jiifka ah koritaanka sariirta caruurta ee sariirta | gaar ahaan mid deggan oo muujinaya caleemaha qoryaha culus
sariirta la sameeyo qalabka waara, haboon baahida ilmahaaga sii kordhaya iyo waa iyada oo la raacayo caadiga ah ammaanka Yurub EN 716-1 + A1: shahaado 2013 iyo EN 716-2: 1 & EN 2013-71 + A3. dhul- waxaa lagu hagaajin karo in height oo aan aad isagoo u dhiska sariirta in dhowr talaabo oo sahlan 5-laab. booska ugu sareeya ee qaab-dhismeedka daaqaddii fududeeyaa badan ee iyo ilmahaaga u qaadeen in maalmaha hore.
Marka uu ilmahaagu gaaro dherer gaar ah, u qaabee jaantuska meesha ugu hooseeya. Marka lagu daro sidan, waxaad ka saari kartaa 3 ka soo raridda qashinka. Tani waxay u ogolaaneysaa ilmahaaga inuu si madaxbannaan u kaco oo uu sahamiyo qolka ilmaha. Marka da'da yar ee la gaari karo, sariirta waxaa loo bedeli karaa sariir yar yar dhawr tallaabo. Gaar ahaan waqtigan, awoodda rarida ee shaxda xaddidan ee 100Kg gaar ahaan faa'iido leh.
Dhaqaaqa iyo qaababka labadaba waxay ka sameysan yihiin alwaax adag. Beech Wood waa dhar adag oo si aad ah u xasilloon oo adkaysi leh marka la barbar dhigo dhajinta. Intaa waxaa dheer, beechwood waxay leedahay hantida hirgelinta cimilada-lagu maamulayo xannaanada. Waxaan ka soo qaadnaa qoryaha cagaaran ee ka soo jeeda warshad timirta oo joogto ah oo shahaado ah oo ka tirsan Midowga Yurub.
SANO 7 "DHAMMAAN AMMAANKA AMNIGA AMNIGA". Waxaan ku qanacsanahay tayada qalabkayaga guryaha iyo, marka lagu daro muddada damaanad qaadka ah ee loo qoondeeyey sannadaha 2, waxaan ku siinaynaa dammaanad dheeri ah oo ah 5 sano Belivin. Markaa, waxaad haysataa damaanad 7 sano oo ah qalabka gurigaaga Belivin waana lagaa daboolay dhammaan sannadihii 7.
Sterntaler sariirta-jiifka ah, Da'da: Ilmaha dhasha, tilmaame cad
Riyada riyooyinka wanaagsan iyo hurdada nasashada leh: sariirta cirfiidka-sariirta ee sariirta
Isku-xirnaanta fudud ee sariirta - khafiifnimo wacan, ku-xirnaanta walaxda iyo cirifka suuragalka ah
Shaqo tayo sare leh: Voile: Outer Sheaks dibadda 1: 100% Polyester; Dibedda dharka 2: 60% suuf, 40% polyester
Waa sahlan tahay in la nadiifiyo: Mashiinka lagu dhaqi karo 40 °
Baaxadda sahayda: 1 Sterntaler sariirta-cirka, caddaan
Cot 120x60 cm adag; 3-laab Dhererka isku dheellitirka; 3 isku-shaandhaynta dhinacyadeeda; bandhigay cad
120x60 cm Ilmaha iyo sariirta laga sameeyay alwaax cad oo loogu talagalay qolka carruurtaada
Alaabta carruurta oo la dhigo qolka sawir qaadaha oo leh dabool sariirta jiifka ah
Wareegga 3 ee dhererka la isku hagaajin karo
3 Xayiraad ku dhejisan qaybta bogga
aad u weyn oo deggan xasilloonida ilmaha. Wax ka sameeyey EU-da
KOKO sariirta ilmaha oo sariir caruus ah oo JULIA cad cad ah oo ah 120x60 cm JULIA xayeysiis
Biin, rinji cad oo leh candhuufta iyo rinjiga biyaha u adkeysta
Qalabka dharka: barkimad leh barkad leh 40x60 cm, buste ku dabool buste: 120x90 cm, buul leh difaac madaxa, jaan gooye leh qaanso, maaddooyin: 100% maqaarka-satin suufka ah (waxyar dhalaalaya), shahaado u leh sida uu sheegayo Oeko-Tex Standard 100
Jumladda slatted 3-way dhererka waa la hagaajin karaa laga soo bilaabo 11 cm ilaa 24 cm iyo 40 cm (laga cabbiro sagxada)
Cabirrada: W: 65 cm L: 125 cm H: 83,5 cm
Cot Crib Cot wuxuu soosaaraa 120x60 Cayr orso orso leh oo leh joodariga NEWdisplay
Sariirta ilmaha ee KOKO | "LILLY" | 120x60 cm | bandhigay cad
Qayb ahaantiin adag, rinji ranji leh (dhidid iyo daahan u adkeysiga candhuufta)
Slat frame 3-laab laab dhererka waa la hagaajin karaa laga soo bilaabo qiyaastii 17 cm ilaa ugu dhawaan.
wareega goos gooska ah 3 waa laga saari karaa, waxaa loo bedeli karaa sariirta yar
Baaxad: B: qiyaastii 70 cm | L: ku saabsan 125 cm | H: ca.84 cm, dusha hoos udhaca: 120x60 cm
Maqaalka horecream wejiga
Maqaalka xigtablock mindi
kursi miis Children